Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo shalay ka dhacay deegaan katirsan gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya deegaanka Maroodile ayaa sheegaya in dagaal culus uu halkaas ku dhaxmaray ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab iyo maleeshiyaadka Liyuu Booliska loo yaqaan ee ciidamada Itoobiya taabacsan.
Ilo wareedyo ay heshay SomaliMeMo ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay wadada ugaleen kolonyo gaadiid ah oo maleeshiyaadka Liyuu Booliska ay ugelbinayeen dhanka deegaanka Qurac Joome ee dhaca xuduuda ay wadaagaan Bakool iyo dhulka Somaligalbeed.
Ciidamada Al Shabaab ayay usuurta gashay in ay gubaan dhammaan gaadiidkii saadka u siday maleeshiyadka Liyuu Booliska waxaana dhimasho iyo dhaawac noqday ciidamadii gaadiidka ilaalada ka hayay.
Sarkaal katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamadoodu ay gubeen gaadiid badan oo sahay ka qaaday magaalada Beled Weyne wuxuuna ku hanjabay in ay sii wadi doonaan weerarada jidgalka ah ee lagu beegsanayo sahayda ciidamada shisheeye ee duullaanka ku jooga Soomaaliya.